74% dadka adduunka ku nool waxaa la kulmi kara mowjadaha kuleylka halista ah 2100 | Saadaasha Shabakadda
74% dadka adduunka ku nool waxaa ku dhici kara hirarka kuleylka dilaa ah 2100
Xaaladda suuragalka ah ee sanadka 2100 ee qiiqa qiiqa aan la dhimin. Jaale wuxuu matalaa 10 maalmood oo kuleylka dilaa ah, iyo madow 365 maalmood. Sawir - Shaashadda shaashadda.
Mawjadaha kuleylka waa ifafaalooyinka saadaasha hawada ee la soo saari doonaa si aad iyo aad u badan horay usocodka iyadoo celceliska heerkulka adduunka uu sii kordhayo. Hadda, yaa kale oo ugu yar xusuusta wixii dhacay 2003, ee sababay dhimashada 11.435 qof oo ku nool Faransiiska oo keliya, sida laga soo xigtay xogta Machadka Qaranka ee Tirakoobka.
Hadda, 30% dadka adduunka ku nool waxaa la soo dersa mowjado kuleyl ah oo dilaa ah 20 maalmood sanadkii ama wixii ka badan. Haddii qiiqa aan la dhimin, sanadka markuu yahay 2100 boqolkiiba wuxuu noqon karaa 74% sida ku xusan daraasad laga sameeyay Jaamacadda Hawaii (Manoa, USA) oo lagu daabacay joornaalka Isbeddelka Cimilada.
Qorayaasha daraasaddu waxay adeegsadeen saddex nooc oo xaaladood ah oo ay soo diyaariyeen Guddi-dawladeedka Isbedelka Cimilada (IPCC) si loo abuuro khariiddada is-dhexgalka halkaas oo aad ka arki karto halista. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa loo yaqaan Wadada Isku-urursiga Wakiilka ama CPR.
Marka, waxaan arki karnaa in sii wadida qiiqa si la mid ah tan maanta (RCP 2.6 seenyo), sanadka 2050 meelaha sida Panama waxaa jiri doona 195 maalmood oo kuleyl dilaa ah sanadka; gudaha Bangkok (Thailand) 173 maalmood, iyo Caracas (Venezuela), 55 maalmood. Laakiin haddii uu kordho qiiqa (RCP 4.5), dhammaadka qarniga meelaha sida Malaga waxaa jiri doona 56 maalmood oo ah mowjado kuleyl oo khatar badan leh.
Arinta murugada leh ayaa ah in kastoo wadamada ay qaadaan talaabooyinka lagama maarmaanka u ah yareynta wasakheynta deegaanka dadku waxay u dhimanayaan kuleylka xad dhaafka ah. Kuleyl ah, marka uu jiro huur badan, jidhku ma awoodo inuu sii daayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » 74% dadka adduunka ku nool waxaa ku dhici kara hirarka kuleylka dilaa ah 2100
Astaamaha iyo muhiimadda stratosphere